I-Nassau yomlando - I-Airbnb
I-i-guesthouse ephelele ibungazwe ngu-Christina
U-Christina Ungumbungazi ovelele
I-Quaint Cottage yethu isendaweni eyi-Historic Area cishe ngohambo lwemizuzu engama-20 ukuya edolobheni laseNassau - Iningi lezindawo ezikhangayo zingaphakathi kwebanga lokuhamba leNkotshana yethu. Kubandakanya i-Bay Street, amaKhathedrali, kanye nePhalamende Square. Le ndawo yokuhlala yendabuko yase-Bahamian itholakala kwesinye seziqephu zokuqala e-Nassau, indlu enkulu yakhiwa ngo-1938. Isipiliyoni sangempela se-Bahamian, hamba uye e-Bakeries, Izindawo Zomlando, i-Marina, Harbour Bay kanye ne-Paradise Island. Sicela usithinte Ukuze uthole I-Airport Pick Up
Kumafidi angu-225 sq. zonke izinsiza zifakiwe ukuze uthole ukunethezeka nokunethezeka kwakho. Kukhona nokulethwa okutholakalayo izinsuku lapho ungafisi ukuphuma khona. Kukhona indawo yokupaka uma kwenzeka unquma ukuqasha imoto. Njengoba silwela ukuba ngcono i-eco-friendly izikhwama zikakhanvasi ziyatholakala ukuze uyothenga.
4.90 · 121 okushiwo abanye
I-Buen Retiro ingesinye sezigaba zokuqala e-Nassau ezinemizi eminingi enomlando. NgeMigqibelo kwesinye isikhathi ungabamba ihhashi nenqola ekhombisa izivakashi endaweni. Uyacelwa ukuthi uqaphele ukuthi yize iningi lendlu inokuthula itholakala eduze kwaseShirley Street umgwaqo omkhulu oya ePrincess Margaret Hospital ngakho-ke uzozwa izinhlabamkhosi ngezikhathi ezithile. Futhi i-Sacred Heart Catholic Church izoshaya izinsimbi zayo kusihlwa kaningi ngo-6PM ngeMisa. Kusukela kwamakhelwane ungase futhi uzwe ucingo lokugcina lwayo yonke imikhumbi yokuhamba ngezikebhe Ethekwini. Lokhu kuyajabulisa kakhulu ngosuku olwandulela uNcibijane.
Njengoba ikotishi labelana ngokufinyelela okujwayelekile nendlu enkulu futhi lihlala ngemuva kwegceke elibiyelwe uzozizwa usekhaya.